मधुमेहले आँखा जाला है ! | Hamro Doctor News
मधुमेहले आँखा जाला है !
By डा. इरिना कंसाकार, आँखारोग विशेषज्ञ
मधुमेह अल्पबिकसित र विकाससिल देशहरुमा अन्धोपनको एक प्रमुख कारण हो । मधुमेहले मस्तिष्क, किड्नी र मुटु लगायत आँखा जस्तो अति महत्वपुर्ण अंगमा असर गर्दछ । मधुमेह सिर्जित दृष्टि समस्या बिस्तारै बढ्दै जाने र बिरामीले थाहा नपाई धेरै क्षति भैसकेको पनि हुन सक्छ । त्यस कारण यसलाई “silent disease” को रुपमा पनि लिन सकिन्छ । मधुमेह भएका मानिसहरुले समस्या आए पछी मात्र आँखा परिक्षण गर्ने सोच बनाउनु हानिकारक हुन्छ । नियमित जांचमा सामान्य किसिमको समस्या आइसकेको थाहा लागेमा दृष्टि कमजोर हुनबाट बचाउन र त्यो भन्दा बढी हानी हुनबाट रोक्न सकिन्छ । समयमा नै रोग पत्ता लगाउन नसकिएमा दृष्टि बचाउन कठिन हुने तथा कतिपय अवस्थामा त अन्धोपन जस्तो समस्या भोग्नु पर्ने हुन सक्छ ।
कसरी बचाउन सकिन्छ दृष्टि ?
१. मधुमेह भएको थाहा हुने बित्तिकै आँखाको बिस्तृत परिक्षण गराउने ।
२. दृष्टिमा केहि क्षति भैसकेको छ भने चिकित्सकको सल्लाह अनुसार उपचार र परिक्षण गराउने ।
३ . कम्तिमा हरेक २ बर्षमा एक पल्ट retina specialist वा नेत्ररोग विशेषज्ञ (ophthalmologist) बाट आँखाको जांच गराउने ।
मधुमेहबाट कस्ता समस्याहरु हुन सक्छन ?
हाम्रो आँखा लाई विभिन्न दुरीमा हेर्न मद्धत गर्ने महत्व पूर्ण अंग हुन्छ जसलाई लेन्स भनिन्छ । लेन्सको फोकस गर्ने क्षमतामा मधुमेहले असर गर्न सक्छ । अर्को चाही मोतिबिन्दुको समस्या हो । मधुमेह नभएका मानिसहरुमा भन्दा मधुमेह भएका मानिसहरुमा मोतिबिन्दु हुने सम्भावना दुई गुना बढी हुन्छ र उनीहरुमा चाडै सुरु हुने तथा छिटो वृद्धि हुने हुन्छ ।
मधुमेह नभएका मानिसहरुमा भन्दा मधुमेह भएका मानिसहरुमा जलबिन्दु हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । जलबिन्दुले गर्दा आँखा भित्र हुने पानीको बहाबमा अबरोध आउने हुन्छ जसले गर्दा आँखामा पानीको चाप बढ्छ । त्यसले आँखाको पर्दा र दृष्टि नशा लाई क्षति पुग्दछ । यसरी गुमेको दृष्टि कुनै पनि उपचारबाट पुनः प्राप्त गर्न सकिन्न ।
३. आँखाको पर्दा (Retina) सम्बन्धी समस्याहरु
मधुमेहले धेरै असर गर्ने अर्को अति सम्बेदनसिल अंग भने आँखा पर्दा (Retina) हो जुन हाम्रो आँखा को पछाडीको भाग हो । यो भागमा दृष्टि नशा तथा प्रशस्त मात्रामा रक्त नलीहरु हुन्छन । Retina र यसमा हुने रक्त नलीहरु र कोशिकामा हुने परिबर्तन (Retinopathy) हरु नै दृष्टि कम्जोर हुने मुख्य कारण हो । मधुमेहबाट हुने आँखाको रोगलाई सुरुको अवस्था , बिचको अवस्था र अन्तिम अवस्था गरी तिन तहमा बिभाजन गर्न सन्छ ।
रक्त नलीहरुमा हुने पहिलो खालको समस्या ( background retinopathy) मा Retina का रक्त नलीहरुबाट रगत र प्रोटिन जस्ता पदार्थहरु चुहिने हुन्छ । यो तहको खरावीमा दृष्टि क्षमतामा नगन्य असर पर्दछ । यही अवस्थामा रोग निदान गरि उपचार गर्न सके दृष्टि सामान्य बनाउन सकिन्छ र मधुमेह नियन्त्रण भएमा गम्भीर खालको समस्या आउदैन ।
दोश्रो अवस्थामा ( non proliferative diabetic retinopathy) पर्दामा रगत नालिसगै स-साना रगतका पोकाहरु बन्ने, पर्दाको मुख्य भाग (macula) मा पानी जम्मा भई सुन्निने, केहि भागहरु सुक्ने र नलीबाट रगत चुहिने हुन्छ । समयमा उपचार गरेमा बचेको दृष्टिलाई यथास्थितिमा रोक्न सकिन्छ ।
तेश्रो किसिमको समस्या (Proliferative retinopathy) अझै खतरा पूर्ण हुन्छ । यो तहको समस्यामा पर्दामा नयाँ रक्तनलीहरु बढने र ति रक्तनलीहरु चाडै नै फुट्ने हुन्छ । यसले गर्दा पर्दामा रगत जम्मा हुने दृष्टि कम्जोर हुने, पर्दामा स्थाई प्रकृतिको दाग बस्ने हुन सक्छ । Retina मा एकपल्ट हानी भैसकेपछी पूर्ण दृष्टि रुपमा निको पर्न कठिन हुन्छ र अन्धोपन हुने सम्भावना रहन्छ ।
कस्तो मान्छेहरुमा पर्दाको समस्या बढी हुन सक्छ ?
पर्दामा यस्ता समस्याहरु ल्याउनमा विभिन्न तत्वहरु जस्तै उच्च रक्त चाप, मधुमेह सुरु भएको अबधि , अनुबंशिकता ,रगतमा ग्लुकोजको मात्राले भूमिका खेल हुन्छन । टाइप १ मधुमेह भएका प्राय सबै रोगीहरूमा retinopathy हुने सम्भावना हुन्छ भने टाइप २ मधुमेह भएका धेरै मानिसमा पनि retinopathy बिकसित हुन सक्छ ।
दृष्टि क्षमतामा कस्ता परिबर्तन आउँदा चिकित्सकसंग परिक्षण गराउने ?
आँखा धमिलो देखिदै गएमा
नजिकको पढ्न कठिन हुदै गएमा
डबल भिजन अर्थात् एउटा बस्तु लाई दुइटा देखिने भएमा
एक वा दुवै आँखा दुखेमा
आँखाहरु भारी महशुस भएमा
हेरेको दृष्टि क्षेत्रमा किरा, भुसुना, माकुरा जस्ता आकृतिहरु देखिने भएमा
सधै हेरिने क्षेत्र वा परिधिको कुनै साइडमा बस्तुहरु नदेखिने भएमा
साधारण आँखा परिक्षण र मधुमेह सम्बन्धि आँखा परिक्षण उस्तै हो ?
साधारण आँखा परिक्षण र मधुमेह सम्बन्धि आँखा परिक्षणका केहि जांच समान भए पनि कतिपय परिक्षण फरक हुन्छन । साधारण आँखा परिक्षणमा दृष्टि क्षमता र आँखाका सामान्य रोगहरुको परिक्षण एवं उपचार हुन्छ भने मधुमेह भएका मानिसहरुमा विशेष गरि आँखाको पछाडीको भाग अर्थात् Retina को बिस्तृत परिक्षण गरिन्छ । यस्तो परिक्षण Retina सम्बन्धि बिशेषज्ञ चिकित्सकले गर्दछन । आँखाको नानी ठुलो पारेर , बिशेष यन्त्रबाट खिचिएको Retina को फोटो र विभिन्न भागहरुको स्क्यानहरुको अध्ययन गरेर Retina को सहि अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ । कुनै कुनै अवस्थामा हातको नशाबाट औषधि पठाएर चभतष्लब का नशाहरुको angiogram गरेर पनि Retina को अवस्थाको जानकारी लिन सकिन्छ । त्यसै गरि भिडिओ एक्सरे (Ultrasound) गरेर पनि Retina का धेरै समस्याहरुको निदान गरिन्छ ।
मधुमेह सिर्जित आँखा समस्याहरु सुरु भैसकेपछि क्षतिलाई पूर्ण रुपमा निर्मुल गर्न नसके पनि त्यस्ता समस्याहरु आउन नदिन र समस्या सुरु भए पछी पनि त्यसलाई बढ्न नदिन सकिन्छ । नियमित आँखा तथा Retina को परिक्षण गराउने , नियमित रुपमा रगतमा ग्लुकोजको मात्रको जांच गराउने, रक्त चाप र कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्ने, धुमपान नगर्ने र दृष्टि क्षमतामा परिबर्तन आउने बित्तिकै चिकित्सक संग परामर्श लिने गर्नाले मधुमेह बाट हुने आँखा र दृष्टि सम्बन्धि हानी लाई रोक्न सकिन्छ ।
नयाँ प्रबिधि र खोजहरुको प्रयोगबाट समयमा नै रोकथाम तथा उपचार गरि मधुमेहबाट दृष्टिमा पुग्न सक्ने हानी र नकारात्मक परिवर्तनबाट समस्या हुने मान्छेहरुको संख्या घट्दै गएको छ ।
मधुमेह सम्बन्धि आँखा रोगहरुको उपचारका बिधिहरु के के छन् ?
आँखामा नशाबाट रगत चुहिने र रक्त नलीहरु फुट्ने धेरै जस्तो समस्याहरुमा लेजर उपचार पद्धति प्रयोग गरिन्छ । यसले तत्काल रगत रोक्ने मात्र नभई अरु क्षति हुनबाट पनि रोकथाम गर्दछ । लेजर उपचार पद्धतिबाट उपचार गर्न अस्पतालमा भर्ना हुनु भने पर्दैन । आँखा भित्र धेरै रगत भएमा वा पर्दा च्यातिएमा अपरेशन गरेर पनि उपचार गर्न सकिन्छ ।
मधुमेहले हाम्रो आँखाको दृष्टि कम्जोर बनाउन सक्छ ।
मधुमेहबाट हुन सक्ने हानीलाई रोक्न धेरै उपायहरु गर्न सकिन्छ ।
दृष्टि कमजोरी हुनबाट बचाउन समयमा नै रोगको निदान हुन आवश्यक छ ।
मधुमेहबाट आँखामा केहि कमजोरी आइसकेको रहेछ भने पनि त्यो भन्दा बढी हानी हुनबाट बचाउन सकिन्छ ।
मधुमेहबाट आँखामा भएको असरको बिस्तृत जांचका लागि सम्भव भएमा आँखाको पर्दा Retina सम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सक ( Retina Specialist ) सँग परिक्षण गराउनु पर्छ ।Retina Specialist चिकित्सक उपलब्ध नभए नेत्ररोग विशेषज्ञ ( General ophthalmologist) सँग आवश्यक परिक्षण गराई परामर्श लिन सकिन्छ ।
Last modified on 2016-05-15 17:31:25